musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Atlantic Canada Inovhura Vaccinated Vafambi veUS
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ichitevera chiziviso chekuvhurwa kwemuganho weCanada, matunhu eAtlantic Canada achavhura vachengeti vakazara vafambi veAmerica kutanga Nyamavhuvhu 9, 2021.
New Brunswick ichagamuchira vafambi vekuAmerican avo vakagamuchira yakazara yakazara nhomba ye COVID-19 inogamuchirwa neHurumende yeCanada.
Kutanga Nyamavhuvhu 9, vakadzivirirwa zvizere vafambi veUS vanobvumidzwa kupinda Newfoundland & Labrador.
Kutanga Nyamavhuvhu 9, vashanyi veAmerica vanokodzera sevatsotsi vakazara vanofanirwa kunyorera kupinda muNova Scotia.
Matunhu mana eAtlantic Kanadha ichavhura kune vakazara vaccine vafambi veAmerica kutanga Nyamavhuvhu 9, 2021.
Inowanikwa kuchamhembe kwemuganhu weUS weMaine, Atlantic Canada inzvimbo isina vanhu, nzvimbo yemahombekombe inoumbwa nematunhu mana eCanada New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & Labrador, uye Prince Edward Island.
Iyo yepakati-Nyamavhuvhu kuvhura muganho inobvumira vafambi veUS kunakidzwa mwaka wezhizha wapera muAtlantic Canada, iyo inopa yakadzikama mamiriro ekunze, anodziya emahombekombe emvura, uye kwekunze kwekushanya. Kuwa uku kune mavara ane mavara uye akati wandei wepasi- chikafu chikafu uye tsika mitambo. Inosvikika zvirinyore kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, iyo nharaunda inopa inoshamisa mhenderekedzo yegungwa, nyowani yezvokudya zvegungwa, yakavhurika-yakavhurika nzvimbo dzekunze, zviitiko zvepasi uye zvemvura, uye nezvimwe zvakawanda.
Vafambi vese vanofanirwa kushandisa ArriveCAN (App kana webhu portal) kuendesa yavo yekufambisa ruzivo. Kunze kwekutevedzera kuFinland mafambiro ekufambisa, dunhu rega rega mukati meCanada rine yavo marongero ekufambisa uye zvinodiwa kuchengetedza vagari kubva kuCOVID-19. Sezvo maprotocol achisiyana nedunhu rega rega, hezvino izvo vafambi vanofanirwa kuziva nezve kupinda mupurovhinzi imwe neimwe kuronga yavo inotevera Atlantic Canada kushanya.
Kana imwe nguva muganhu weCanada wabuda musi waNyamavhuvhu 9, New Brunswick ichagamuchira vafambi vekuAmerican avo vakagamuchira mushonga wakazara weCCVID-19 inogamuchirwa neHurumende yeCanada.
Kutanga Nyamavhuvhu 9, vakabaiwa vachena vese vekuUS vanobvumidzwa kupinda muNewfoundland & Labrador uye vanofanirwa kuendesa fomu yekufambisa mukati maawa makumi maviri nemaviri kubva pazuva ravanotarisirwa kufamba uye kutevedzera nhungamiro yehutano hweveruzhinji panguva yekugara kwavo. Vafambi vakazara vanodikanwa kuti vazviparadzanise kana kuongororwa COVID-72 pavanosvika kudunhu.